भारतीय क्रिकेट टिमका सम्भावित तीन प्रशिक्षक! | | Neplays.com
भारतीय क्रिकेट टिमका सम्भावित तीन प्रशिक्षक!
By Neplays	 Last updated Jul 22, 2019
आईसीसी विश्वप २०१९ मा भारतीय टिम सेफिाइनलबाट बाहिरिए पछि प्रशिक्षक रवि शास्त्रीको कार्यकाल थप नगर्ने भन्दै टिमका लागि नयाँ प्रशिक्षकको खोजि शुरु भइसकेको छ ।
त्यसका लागि कपिल देवको नेतृत्वको समितिले काम गरिरहेको छ । भारतीय प्रशिक्षक बन्नका लागि उक्त समितिले योग्यता पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । रवि शास्त्रीले भारतीय टिमलाई २०१७ को च्याम्पियन्स ट्रफीपछि सम्हालेका हुन् । उनको कार्यकाल विश्वकप लगत्तै सकिएको भएपनि वेस्टइण्डिज सिरिजसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ ।
बीसीसीआईले नयाँ प्रशिक्षकका लागि १६ जुलाईमा सूचना जारी गरेको थियो । प्रशिक्षकले आवेदन दिने अन्तिम मिति ३० जुलाईसम्म तोकिएको छ । बीसीसीआईले मुख्य प्रशिक्षक बन्नका लागि शर्तहरु राखेको छ । उमेर ६० वर्ष भन्दा कमको हुनुपर्ने, टेस्ट खेल्ने देशलाई कम्तिमा २ वर्ष प्रशिक्षण गराएको तथा एशोसिएट राष्ट्रको टिम तथा आईपीएलको टिमलाई कम्तिमा ३ वर्ष प्रशिक्षण गराएको हुनुपर्ने छ ।
१ टम मुडीः
भारतीय टिमको प्रशिक्षकको रुपमा टम मुडी प्रबल दावेदारका रुपमा रहेका छन् । अस्ट्रेलियाका मुडि एक खेलाडी भन्दा पनि प्रशिक्षकको रुपमा सफल रहेका व्यक्ति हुन् ।
मुडिले २००१ मा अस्ट्रेलिया क्रिकेटबाट सन्यास लिएका थिए । त्यसपछि उनी प्रशिक्षकको करियरमा गए । उनले २००५ मा श्रीलंकन टिमको प्रशिक्षक भएर काम गरे । उणको प्रशिक्षकत्वमा २००७ को विश्वकपमा श्रीलंका फाइनलमा पुगेको थियो ।
यसैगरी आईपीएलमा सनराईजर्स हैदराबादको प्रशिक्षक भएर काम गरेका अनुभव मुडीसँग छ । उनले सम्हालेपछि हैदराबादले २०१६ को आईपीएलमा उपाधि जितेको थियो । अहिले मुडीले हैदराबाद टिम छाडिसकेका छन् । उनले आफूलाई भारतीय टिमकै प्रशिक्षकका रुपमा आवेदन दिनका लागि हैदराबाद छाडेका आंकलन गरिएको छ ।
२. महेला जयबर्द्धने
भारतीय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकको रुपमा श्रीलंकन पूर्व क्रिकेटर महेला जयबर्द्धनेको नाम पनि अगाडि आएको छ । महेला जयबर्द्धने श्रीलंकाको महान ब्याट्सम्यान मध्ये एक हुन् ।
२०१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट विदा भएपछि जयबर्द्धनेले अहिलेसम्म मुख्य प्रशिक्षकको रुपमा कतै पनि काम गरेका छैनन् । तर उनले विभिन्न टिमको सल्लाहकारको रुपमा काम भने गरेका छन् ।
उनीसँग इंग्ल्याण्ड टिमको ब्याटिङ प्रशिक्षक भएर काम गरेको अनुभव छ भने आईपीएलको टिम मुम्बई इन्डियन्सको प्रशिक्षकको रुपमा २०१७ मा आवद्ध भएका थिए । उनको संलग्नतामा मुम्बईले तीन सिजन मध्ये २ सिजन उपाधि जित्न सफल भएको छ ।
३. गेरी कस्टर्न
दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व खेलाडी गेरी कस्टर्नको बारेमा परिचय नै दिनु पर्दैन् । उनकै प्रशिक्षकत्वमा भारतले २०११ मा विश्वकप नै जितेको थियो ।
भारतले २८ वर्ष पछि उनी प्रशिक्षक भएका बेला उपाधि जितेको हो । गेरी कस्र्टनको प्रशिक्षकत्वमा भारतले सानदार प्रदर्शन गरेको थियो । भारतीय खेलाडीसँग राम्रो तालमेल कायम गरेका कस्टर्नलाई पनि भावि प्रशिक्षकको रुपमा हेरिएको छ ।
२०२३ को विश्वकप पनि भारतमै हुन लागेको कस्टर्नलाई भारतले फेरि एक पटक मौका दिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । तर अन्तिम निर्णय भने पछि नै थाहा हुने छ ।
टी २० मा बंगलादेशमाथि पाकिस्तानको रोमाञ्चक जीत
न्युजिल्याण्डविरुद्धको पहिलो टी २० भारतले जित्यो
टी २० मा भारतलाई न्युजिल्याण्डको २०४ रनको लक्ष्य
भारत र न्युजिल्याण्डबीचको पहिलो टी २० आज, वर्षाले प्रभाव पार्ने !
त्रिकाेणात्मक सिरीजका लागि नेपाली टिमकाे घाेषणा, २ नयाँ अनुहार (सूचीसहित)
निलम्बनका कारण बन्द भएकाे क्यानकाे बैंक खाता खुल्ला, खेलाडीका बारेमा नयाँ याेजनामा…